संक्रमण समझदारी पुर्बक नियन्त्रण गरौ , जातिय हिंशा न फैलाऔ - मानवता जोगाई राखौ - Nepali Sanchar : 24/7 Online Radio from Melbourne, Australia
कुनै धार्मिक आस्था राख्न पाउनु गलत होइन तर त्यहि आस्थाको निहुमा दुनियाँलाई जीवनमरणको दोशाघमा पुर्याउनु गलत हो। यसमा के मुस्लिम के हिन्दु !! सबै मिलेर एक जुट भएर कोरोना संग लडौ । आफु सुरक्षित रहौ र आफ्नो राष्ट्रलाई पनि सुरक्षित राखौ ।
प्रमोद के सोनी , गाईघाट-उदयपुर हाल मेलबर्न अस्ट्रेलिया
अहिले नेपालको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कोरोना जातियबाद भएर उभ्रिएको छ । कोरोना संक्रमणको कुरा गर्ने हो भने यसले जात, देश हेर्दैन । त्यस्तो हो भने आज शक्ति साली राष्ट्रहरु गुहार गुहार गर्दैन थिए होला । कोरोनाले आज छुत अछुतको भेदभाब नै खतम गरेको अवस्था छ । के हिन्दु, के मुस्लिम र के इशाई – सबै संक्रमित छन् ।
अहिले नेपालमा जल्दो बल्दो बिषय बनेको छ ” भारतीय तबलिगी मुसलमान ” जसले गर्दा नेपालमा कोरोना फैलियो रे । हाल उदयपुर-१३,काठमाडौं ५, कैलाली-४, पर्सा-३, बाग्लुङ-२, चितवन -२, कञ्चनपुर-१, रौतहट-१ गरि जम्मा ३१ संक्रमण देखिएको छ नेपालमा । यसमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायका सबै छन् । जब कोरोनाले जात धर्म हेरेन भने हामी को हौ र विभेद गर्ने ?
यतिखेर कोरोना संक्रमण स-संगै मानसिक्ताको औषधि पनि खोज्ने जमर्को गर्नु पर्ने देखिदै छ हैन भने भारतको हातमा बेचिएको बिकाउ संचारले देश टुक्रा-टुक्रा बनाउन बेर लगाउदैन । त्यतिनै देशको चासो छ भने सब भन्दा पहिले यो पत्तो लगाउनु पर्ने हुन्छ कि कसरि भित्रिए यी तवलिगीहरु र कहिले भित्रिए ? सिमानामा बसेका सैनिकले किन आउन दिया बिना जाच र किन तिनीहरुको विवरण राखिएन ?
हेर्ने हो भने, इंडियामा लक्डाउन भए पछि दिल्ली देखि हिडेर यति चाडै कसरि छिरे नेपाल , पाकिस्तानबाट कसरी नेपाल आए अथवा कुन श्रोतले आए ? बिना सरकारको अनुमति त्यसै त पक्कै छिरेनन होला। प्रकाशित खबरलाई मान्ने हो भने भइएको छ ” सप्तरीमा आयोजना गरिएको तवलिकमा आएको भारतीय मुसलमान “, यसअर्थमा सरकारको स्विकृतिमा आयोजना गरिएको थियो र एकाएक सिमाना सिलबन्दिले यतै रोकिए उनिहरु । के घरमा आको पाहुना संग गर्ने व्यवहार यहि हो त ? यहाँ मुसलमान शब्दलाई आतंकारीको संज्ञा सामाजिक संजाल र बेचिएका समाचार संस्थाले दिरहेका छन् र हामीले मनबता बिर्षेर उनीहरुलाई कोरोना नेपालमा जानी जानी भित्राउन आएको संज्ञा दिन थालेका छौ । कहाँ गयो हामी नेपालीको मानबता ?
याद राख्नुहोस् ” कोरोना कसैले भित्राएर भित्रिदैन , यो तपाई हामी सबैलाई हुन सक्छ । यति बेला मनमा भ्रम पालेर बस्नु भन्दा कसरि आफुलाई सुरक्षित राख्ने र कसरि समाजलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने बारेमा सोचौ । मानब भएर मनबता नबिर्शौ र भ्रामिक सामाजिक संजालका पोस्टहरुमा लागेर भ्रामिक नबनौ । हुन सक्छ उनीहरु बन्दले गर्दा बाहिर निस्किन नसकेर आफ्नो घर जान नपाई कसैकोमा बास बसेको होस् ।
यो पनि पढ्नुहोस : उदयपुरको स्थानिय तहलाई क्वारेन्टाइन सहयोगी सामंग्री हस्तान्तरण
जानेर कोहि पनि संक्रमित हुन चाहदैन । उदयपुर अहिले नेपालकै केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ र जातभातलाई त्यागेर मानवताको हैसियतले एउटा उदाहरण बनेर बिदेशीलाई पाहुनाको पनि हामी रेखदेख गर्छौ भन्दै विश्वमा एउटा नमुना बनौ किन भने उनिहरु जस्तै पाहुना हामी नेपाली पनि विभिन्न देशमा छौ जहाँ हामीलाई स्वास्थ्य जाचमा हेला गरेर कयौ नेपालीहरु कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको समाचार सेलाएको छैन । यहाँ भुल्केको मुसलमान भनेर समाचार आउछ, भुल्के निवासी फलानो नेपाली या उदयपुरे भनेर किन आउदैन ? हिन्दु संक्रमित हुदा फलानो हिन्दु भनेर कहिले समाचार आएन , किन विभेद ? बिकसित राष्ट्रहरुको समाचार पढेर हर्नुहोस , त्यहाँ अहिले सम्म यो लेखिएको छैन कि यति मुस्लिम , त्यति इसाई वा हिन्दु कोरोना संक्रमित छन् । एक दुई जनाको मुर्खताको परिणामले सबै समुदायलाई किन दोष दिने ? नत्र यसै म बदनाम उसै म बदनाम भनेर समस्या जटिल न होस् । अल्पसंख्यक जहिले आफुलाई कमजोर ठान्छ र हामीले त्यो डर हटाउन जरुरि छ ।
मेरो यो पोस्ट मानवताको निम्ति हो । यो पढेर प्रश्न उठ्लान तपाइको मनमा तर एक चोटी सोच्नु होस् सायद त्यो मुसलमान दाजुभाईको ठाउँमा हाम्रो घरकाले विदेशमा यस्तै भोगेको भए के मद्दत होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्थियो होला ? आज विदेशमा जति पनि नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् त्यसको एउटा मात्र कारण छ – गैर-नागरिक भन्दा त्यहाको नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु । कतै हामी मानवता बिर्सेर अमानव त बनि रहेको छैनौ ? अबश्य सोच्नु होला एक चोटी !
corona virus in bhulkecorona virus in gaighat udayapur nepalcorona virus in nepalcorona virus in Province 1 in nepalgaighat nepallatest news form udayapurlatest news from gaighatlatest news from state 1 of nepalmuslim corona patient in udayapur nepal
Spread the love98Sharesप्रमोद के सोनी, नेपाली.
Spread the love237Sharesउदयपुर । वल्र्डभिजन इन्टरनेसनल.
Spread the love309Sharesवल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग.